Mon, Jul 13, 2020 at 1:52pm
प्रदेश नं १ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम शुरु
पथरी, मोरङ, १ फागुन । प्रदेश नं १ का छ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको रुपमा देखिएको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयले सोमबारदेखि विधिवत्रुपमा काम शुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव यज्ञबहादुर खत्रीका अनुसार यो मन्त्रालयले केन्द्रको गृह मन्त्रालयसरह काम गर्नेछ । सूचना तथा सञ्चार, कानून र सामान्य प्रशासनको सम्पूर्ण कार्य यसै मन्त्रालयबाट हुनेछ । मन्त्रालयका सचिव खत्रीले प्रदेशका छ मन्त्रालयमध्ये अधिकारको हिसाबले शक्तिशाली रहेको..
अर्घाखाँचीमा एउटै गाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुलाई सम्मान
अर्घाखाँची, १ फागुन । एउटै गाउँका तीन पार्टीबाट स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व भएको भन्दै तीनै जनालाइ गाउँलेले एउटै मञ्चमा सम्मान गरेका छन् । मालारानी गाउँपालिका–५, बाँगीबाट राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट चन्द्रबहादुर खडका, प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसबाट निर्मला क्षेत्री र मालारानी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले)बाट प्रमिला क्षेत्री निर्वाचित भएको खुशियालीमा स्थानीयले सोमबार खुशीका साथ सम्मान गरेका हुन् । बाँगीबाट नीति निर्माण तहमा पुगेका प्रतिनिधिलाई आरुखोरमा..
मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वका लागि पुर्वसांसदको महत्वपूर्ण भूमिका छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ, २९ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वका लागि पूर्वसांसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा गरिन् । पूर्वसांसद मञ्चले आयोजना गरेको दुईदिने राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले पूर्वसांसदको व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र योगदानको कदर हुने विश्वास आफूले लिएको बताएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएकाले देश र जनताप्रति जनप्रतिनिधि उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्..
पार्टी एकता र सरकार गठनको सहमति नजिक पुगे ओली–प्रचण्ड
काठमाडौं, माघ २९ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरु पार्टी एकता र सरकार गठनमा सहमति नजिकै पुगेका छन् । दुई अध्यक्षहरुबीच ललितपुरको मानभवनमा रहेको एक निजी घरमा भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल पार्टी एकता र सरकार गठनका लागि सहमति नजिकै पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक..
नेपाली काँग्रेसले टुंगो लगायो ४० समानुपातिक सांसदको सूची, नामावली आयोगमा पेश
काठमाडौँ, २९ माघ । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको स्थानअनुसार नामावली टुंगो लगाई निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले समानुपातिक स्थानको नामावली टुंगो लगाएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिए । समानुपातिक सूचीमा खस÷आर्य (पुरुष) तर्फ बालकृष्ण खाँड, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, किशोरसिंह राठौर, सत्यनारायण खनाल, सूर्यबहादुर केसी र..
सोमबारदेखि देशभरको मौसम बदली, सफा हुन दुई दिन लाग्‍ने मौसमविद्को भनाइ
माघ २९, काठमाडौं पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण सोमबार बिहानैदेखि काठमाडौं लगायत देशभरको मौसममा बदली भएको छ। काठमाडौंसहित देशभर घाम नलाग्ने, चिसो बढ्ने, बादल लाग्ने भएको छ भने पश्चिमी क्षेत्रमा छिटफुट वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको कारण बिहानैदेखि काठमाडौंसहित देशको सम्पूर्ण भागमा मौसम पूर्णरुपमा बदली भएको हो। यो अवस्था मंगलबार बेलुकासम्म रहन्छ । सोमबार बिहानैदेखि पश्चिम र मध्यहिमाली क्षेत्रमा..
७ वटै प्रदेशमा राजनीतिक चहलपहल बढ्यो, यसरी बन्दै छ सरकार !
काठमाडौं, माघ २९ । राष्ट्रियसभा चुनाव सकिएलगत्तै सातवटै प्रदेशमा राजनीतिक चहलपहल बढेको छ । दलहरु सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । यसको सुरुवात प्रदेश ३ बाट सुरु भएको छ । प्रदेश ३ का एमाले संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी नेपालको इतिहासमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको वाम गठबन्धनले सरकार गठनको दावी..
प्रदेश नं ४ को मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त, बुधबार शपथ कार्यक्रम
पोखरा, माघ २९। प्रदेश नं ४ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा बहुमत भएका एमाले र माओवादीले सरकार गठनको दाबी गर्दै गुरुङलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेका थिए । गुरुङ आइतबार मात्र एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । ‘मलाई २७ जना प्रदेश सदस्य रहेको एमाले प्रदेश नम्बर ४ को संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रुपमा..
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन
हेटौंडा, माघ २९ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जम्मरकट्टेल र एमालेबाट केशव स्थापित मन्त्री बनेका छन् । जम्मरकट्टेलले प्रदेशको गृह मन्त्रालय मानिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् भने स्थापित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु दुबै जनालाई सोमबार प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सपथ ग्रहण गराएकी छन् । आन्तरिम मामिला..
प्रदेश नं ३ का नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा पदबहाली
हेटौँडा, २९ माघ । प्रदेश नं ३ नं प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आज अपराह्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदबहाली गरे । पदबहालीपछि आयोजित समारोहमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश नं ३ को सन्तुलित विकासका लागि सीमित स्रोत साधन परिचालन गरी १३ वटा जिल्लामा नमूना शहर बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको काम अगाडि बढाउन आवश्यक कानून निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने बताए ..
प्रहरीद्वारा तातोपानी नाकाबाट १ सय १८ किलोग्राम अवैध सुन बरामद
मेलम्ची, २९ माघ । सिन्धुपाल्चोकबाट छ वर्षमा ११८ किलोग्राम ११ तोला ९३ लाल अवैध सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । तातोपानी नाकाबाट अवैध रुपमा सुन तस्करी गरी लैजाने क्रममा पछिल्लो छ वर्षमा प्रहरीले बरामद गरेको सुन तातोपानी भन्सार कार्यालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाइएको छ । भूकम्पअघि तातोपानी नाका सञ्चालन हुँदा सुन तस्करको गिरोह जिल्लामा सक्रिय थियो । नेपाली र चिनियाँ नागरिकको मिलेमतोमा नेपाल..
कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी फरार अपराधी २० वर्षपछि पक्राउ
बुटवल, २९ माघ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाइएका एक फरार अपराधी २० वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । रुपन्देही जिल्लाको साविक हर्नैया गाविस–२ हाल सियारी गाउँपालिका–३ की चन्द्रावती थारुलाई विसं २०५३ जेठमा कर्तव्य गरी मारेको अभियोगमा रुपन्देही जिल्लाको साविक सिक्टहन गाविस–६ (हाल देवदह नपा–१२) बस्ने वर्ष ५० को राधेश्याम जैसवाल कलवारले भैरहवामा आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई बसोबास गरेको अवस्थामा..
प्रदेश नं ३ मा नव निर्वाचित मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा सपथ
हेटौँडा, २९ माघ । प्रदेश नं ३ का प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई आज यहाँ आयोजित समारोहमा पद र गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् । प्रदेश नं ३ मा बहुमत ल्याएको एमालेले सरकार गठनको दाबी गर्दै पत्र बुझाएपछि आइतबार साँझ प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकी थिइन् । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट मकवानपुर–१(ख)बाट निर्वा्चित भएका उनी प्रदेश नं..
सरकार समक्ष जेष्ठ नागरिकहरुले गरे वृद्धाभत्ता बढाउनुपर्ने माग
काठमाडौँ, २९ माघ । ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाभत्ता बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । अहिले पाउँदै आएको रु दुई हजार भत्ता पुनरावलोन गरी महँगी र समयअनुसार बढाउनुपर्ने माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले विगत लामो समयदेखि धर्ना समेत दिँदै आएका हुन् । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार यातायात र स्वास्थ्योपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेलगायतका माग गर्दै विगत पाँच वर्षदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन अगाडि धर्ना दिँदै आए..
Results 9844: You are at page 293 of 329